Iphupha malunga nesidlo sangokuhlwa Discover Discover Discover online ▷ ➡️
UYesu nabafundi bakhe badibana, babelana ngesonka newayini, umzuzu wokuthenjwa okukhulu, kodwa ngaphezulu kwesithunzi sokungcatsha sixhomekeke. Esi sidlo sebhayibhile senziwa kwimizobo emininzi, eyona idumileyo nguLeonardo da Vinci, kwaye ibhiyozelwa kwiindawo zamaKristu unanamhla.
Isonka newayini zinamandla amakhulu okomfuziselo njengomzimba kaKrestu, owawunikiweyo, nanjengegazi lakhe elaphalazwayo. Isidlo seNkosi okanye uMthendeleko ecaweni kwelinye icala ukrwela uxhulumaniso noNyana kaThixo, kwelinye icala, umele isenzo sobuntu kunye nomanyano.
Ke ngoko singahlula njani umthendeleko njengenxalenye yephupha lethu? Lithini eli phupha liphupha ngalo mqondiso wephupha?
1 Uphawu lwephupha «iSidlo sangokuhlwa sokugqibela» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «iSidlo sangokuhlwa sokugqibela» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «iSidlo sangokuhlwa sokugqibela» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «iSidlo sangokuhlwa sokugqibela» - Ukutolikwa ngokubanzi
Abantu abasondeleyo kuwe badibana kwisidlo seNkosi kwaye uyabonwabela Conectividad nabanye. Amadoda "Qhekeza isonka", ibinzana elibonisa ngokomfuziselo ubudlelwane bokuthembana. Ngoko ke, ekuchazeni amaphupha, iSidlo seNkosi sifanekisela uluntu, kodwa kunye nosapho.
Olu phawu luphupha lukhomba kokulandelayo Suerte amaxesha ngamaxesha ukuba iintlungu nexhala zinokuphela. Inokuba ngamaxhala emali okanye uloyiko malunga nekamva, kodwa kunye neengxabano zosapho. Iba yindibaniselwano ngakumbi okanye yobuqu mpu melelo lungisa.
Isidlo sangokuhlwa sokugqibela asibandakanyi umanyano kuphela, kodwa ikwanjalo Ukungcatsha. UYesu uxelela abafundi bakhe ukuba kukho umntu oza kumngcatsha, kwaye iziganeko ezilandelayo sele zibeke isithunzi kwisangqa esiqhelekileyo.
Ke ngoko, olu phawu luphupha lukwanokulumkisa ngokungcatsha okuzayo: ayiqhelekanga into yokuba sizive sinethuku xa umntu efuna into embi ngathi. Ukutolikwa kwamaphupha kunokumela apha ithuba lokumamela imikhondo esifuna ukuyifumana.
Uphawu lwephupha «iSidlo sangokuhlwa sokugqibela» - ukutolikwa kwengqondo
Uluntu kunye nosapho zinempembelelo enkulu kuphuhliso lwethu, zisibumba ubomi. Ayimangalisi into yokuba sikwahlawula esi sihloko emaphupheni.
Isidlo seNkosi kufuneka sibonwe ngeendlela ezimbini, njengoko sibonisa uluntu kunye nomanyano wokuthembela kwelinye icala, kwaye uhlala unxulumene nokungcatsha kukaYudas kwelinye.
Ke ukuba ubona iSidlo seNkosi ephupheni okanye ukuba uthatha inxaxheba kuso, oko kungabonisa ukuba ukwenye entsha. Yoluntu ndiziva ndamkelekile okanye kungekudala ndiza kuba yinxalenye yakho. Okanye mhlawumbi woyika umntu iwe phantsi ngasemva. Apha kufanelekile ukujonga ngokusondeleyo ukuba ungubani okanye ufuna ukuthembela kubani.
Ukuba ubhiyozela iSidlo seNkosi ephupheni lakho ecaweni, i-subconscious yakho ifuna ukuba ube ngowakho. ukuqonda Fumana ingqwalaselo: Inokuba usithathile isigqibo awukaqiniseki ngaso (okwangoku) ukuba ingaba sasilungile na kwaye ungasimela phambi kwakho.
Isidlo seNkosi ecaweni sichaza njengophawu lwephupha lokucinezelwa kweemvakalelo zokuziva unetyala, kanye njengokuba ikholwa lijonga isazela salo ukuba liyawufumana na umzimba kaKristu ofuzisisiweyo, jonga ke ephupheni ukuba unento azingcikivayo ngayo ye.
Uphawu lwephupha «iSidlo sangokuhlwa sokugqibela» - ukutolika kokomoya
Ngokomoya, olu phawu luphupha lufana nohlobo Isikhululo sovavanyo kwindlela yophuhliso lwakho: ngubani onokumthemba? Ngaba uyazithemba?
Ukungena kunye nawe Ubunye Ukuze ube nakho ukuza, kubalulekile ukuba ujonge indlela kude kube ngoku kwaye, ukuba kukho imfuneko, wenze izilungiso.